Ho hery ho an'ny firenena rehetra
"Andriamanitrao no nampahery anao; ry Andriamanitra Izay miasa ho anay ô, asehoy ny herinao" Sal. 68:28
Tsy fikasan'ny Tompo ny hampitoka-monina ny vahoakany. Ireo iraky ny Tompo dia nomeny adidy hitory ny filazantsara amin'ny firenena rehetra, sy ny samihafa fiteny ary ny olona rehetra. Adidintsika ny mampahafantatra amin'ny olona fa ilay Mpisolovava Lehibe dia manao fanelanelanana ho an'izao tontolo izao. Nantsoina mba ho solontenan'Andriamanitra teo anatrehan'izao tontolo izao mpanompo sampy ny fiangonana jiosy. Koa mba hahatanterahany izany iraka izany dia adidin'izy ireo ny nitoetra ho firenena niavaka tamin'ireo firenena hafa mpanompo sampy teto an-tany. Adidin'izy ireo ny nijoro ho vahoaka miavaka sy masina teto anivon'izao tontolo izao. Azon'izy ireo natao ny nihazona ny fijoroany ara-panahy tamin'ny alalan'ny fanatanterahana izay tsy notanterahin'i Adama sy i Eva. Tsy inona izany fa ny fankatoavana ny didin'Andriamanitra rehetra, sy ny fanehoana tamin'ny toetrany ny famindrampon'Andriamanitra, ny fahatsarany, ny fangorahany ary ny fitiavany. Araka izany dia azon'izy ireo natao, tamin'ny alalan'ny fahatanterahan-toetrany, ny nijoro ho ambonin'ny firenen-kafa rehetra. Amin'ny alalan'ny vahoakany madio sy mankatò mantsy no androtsahan'ny Tompo ny haren'ny fitahiany.
Araka izany dia natao hisandratra manerana izao tontolo izao ny foto-kevitry ny lalàna izay mifehy ny fanjakan'Andriamanitra. Azo antoka fa araka ny naneken'izy ireo ny famindrampo sy ny fahazavana ary ny fahasoavana nomena azy, no nahatongavan'ireo koa ho fahazavan'izao tontolo izao. Azon'izy ireo natao ny nifantoka mandrakariva tamin'Andriamanitra amin'ny maha-Mpanapaka ambony indrindra sy feno fahendrena ary tsy mety diso Azy, dia ho heniky ny fiderana an'Andriamanitra izao tontolo izao (...)
Jehôvah no Andriamanitsika ary izany koa no fikasany ho an'ny vahoakany izay mino Azy sy mahatoky eo anatrehany ankehitriny. — L, 26, 1894 .